राजनीति Archives - Tufan Media News
काठमाडौं :सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बझुाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष...
काठमाडौं / सरकारले आज नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ नक्शा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल दिउ...
काठमाडौँ, ७ जेठ । मन्त्रिपरिषद बैठकले हालै पारित गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । भारतीय अतिक्रमण परेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा प्रमाणित भएसँगै सार्वजनिक गर्ने तयारी थालिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रा...
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रतिक चिन्हमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखेको भारतलाई म प्रश्न सोध्छु’
काठमाडौं, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई सत्य स्वीकार गर्न वाध्य पार्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले नेपालको भूमि फिर्ता लिन अठोटका साथ नक्सा जारी गरेको र त्यो देखाउनका लागि...
यस्तो छ लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा
सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को...
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार दोस्रो पटक सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ। मिर्गौला दाता समीक्षा संग्रौलाको शल्यक्रिया सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको अस्पतालको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधबार बिहान सबा १० बजे शल्यक्...
संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : प्रतीक्षामा रहेकाे एमसीसी पास गर्नुछ
काठमाडौँ, १३ माघ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बधाई दिँदै आफ्नो मन्तब्य राख्नुभएको छ । मन्तब्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले एकता र सहमतिको महत्व रहेकाे बताउँदै एकता बद्ध नहुँदा प्रतिगामी तत्वहरु बलियो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले लामाे कसरतपछि एकत...
काठमाडौ । जब मान्छेलाई दुख पर्छ नि तब थाहा हुन्छ कि मानिसको खास समस्या र दुख के हो ? हो त्यस्तै दुखमा अहिले रुमालिएकी छिन यि युवती । यिनको नाम हो माला शाह जो १५ बर्षसम्म नेपाली सेनाबाट बरखास्त भएका जर्नलले मोजमस्ती या भनौ उनीस“ग सम्बन्ध राखेर उनको मज्जाले प्रयोग गरे तर जब अहिले घर लाने बेला आयो एकाएक कहा गए कहा ? अहिल...
काठमाडौं – नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण आज हुँदैछ ।राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा हुने एक समारोहकाबीच सापकोटालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउनेछिन् । राष्ट्रपतिले सभामुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । विहान ११ बजेका लागि तय भएको ...